Ministeran'ny Aterineto - Fisolahana miaraka amin'ny Net 21 Cent Century
Fanjonoana miaraka amin'ny 21st Century Net
Ny Ministera Internet dia natsangana tamin'ny volana 1, 1995. Ny Minisiteran'ny Aterineto dia manome fiangonana maro sy marobe kristiana maro ary ireo fahalalana sy boky momba ny fanahy momba an'i Kristy sy ny fiangonany. Ny Tenin'Andriamanitra dia natao ho an'ny olona rehetra ao amin'ny Internet, ary vakin'ny olona ao amin'ny firenena izay mandrara ny famakiana ny Soratra Masina ny Baiboly an-tserasera. Manome Baiboly an-tserasera amin'ny teny Anglisy, Espaniôla, Rosiana ary Vietnamiana izahay. Anisan'izany ny dika mitovy amin'ny Dikan-tenin'ny Mpanjaka Jacques, ny Dikan-teny Amerikanina, ary ny Dikan-teny Maoderina. Natao ho an'ny tsy Kristianina sy ny Kristianina ny fianarana Baiboly amin'ny Internet. Ny boaty an-tserasera Online dia manome fampahalalana manan-danja momba ny vaovao sy ny fanambarana ho an'ny fiangonana rehetra maneran-tany.
Ny Minisiteran'ny Aterineto dia manome torolàlana manerantany ho an'ny fiangonana an'i Kristy, ny maha-mpikambana manontolo ao amin'ny kristiana, ny sekoly sy ny académie, ny oniversite, ny Institiota ao amin'ny Baiboly sy ny sekoly fanofanana, ny bokin'ny Rahalahy sy ny gazetiboky, fivarotam-boky kristiana, fiangonana miaraka amin'ny tranonkala ao amin'ny Internet, ary ny Kataloges Missions of ny fiangonan'i Kristy.
Maro ny olona fantatry ny besinimaro no tonga nanompo tao amin'ny Internet Community tamin'ny Church-of-Christ.org, toy ny World Bible School, Roadmap Series, Lads to Leaders, Lambert Book House, Project USA Today, World Christian Broadcasting, Ten Ny Ministera Radio Fahitalavitra, ny Oniversiten'i Faulkner, ary ny maro hafa.
Ny Minisiteran'ny aterineto dia nanome ny habaka aterineto ho an'ny fiangonana maro sy ministera manerana izao tontolo izao izay tsy manana vola ilaina hampandrosoana ny Filazantsaran'i Kristy ao amin'ny Internet. Ny Tompo izay vonona amin'ny Internet dia hanohy ny tsara indrindra hanompo ny fiangonan'i Kristy ary hampandrosoana ny Evanjelistra maneran-tany an-tserasera.
Misaotra anao noho ny fanohananao mivavaka.